Ziyikhalele indoda ebanjwe ishushumbisa isidoda | News24
Ziyikhalele indoda ebanjwe ishushumbisa isidoda
Nong Khai – Iziphathimandla zaseThailand zibophe owesilisa obezama ukushushumbisa isidoda eLaos, kusho umbiko ngoLwesine.
Kuthiwa lokhu kutshengisa ukuthi iyakhula imboni ye-surrogacy (okunguhlelo lokuthwalela umuntu ingane ngenxa yezimo ezithile) kuleliya lizwe.
Le ndoda, 25, ziyikhalele emngceleni wedolobha iNong Khai kwatholakala kuye amashubhu abefake kuwo isidoda, kusho izikhulu zakuleliya lizwe.
"Bese kungokuka-13 ebanjwa eshushumbisa isidoda engena ngaseNong Khai," kusho isikhulu sitshela i-AFP, sacela ukungadalulwa igama ngoba asigunyaziwe ukukhuluma nabezindaba.
OLUNYE UDABA: Ufuna isinxephezelo ongafakwanga isidoda somlungu
Izikhulu zikholelwa ekutheni lesi sidoda besiphuthunyiswa emtholampilo osebenza ngokuhlinzeka abantu abafuna ukwenza i-surrogacy, ngesidoda.
Kubikwa ukuthi isiminingi imitholampilo yalolu hlobo esibonakele eLaos kulezi zinyanga ezedlule, ngokusho kwenhlangano iFamilies Through Surrogacy.
Izikhulu zithi le ndoda ibiphethe isidoda okuthekelwe ngaso eBangkok, ngamadoda adabuka eChina naseVietnam.